Nagarik Shukrabar - फेसबुक म्यासेन्जरका दस विशेषता
मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४, ०५ : ५६
शुक्रबार, १५ मङि्सर २०७४, ०२ : १३ | शुक्रवार
च्याट गर्ने सजिलो माध्यम अहिले फेसबुकको म्यासेन्जर बनेको छ । फेसबुकले आफ्नो लोकप्रियतासँगै एकअर्कासँग कुरा गर्न सजिलो होस् भनेर म्यासेन्जर एप ल्याएको थियो । जुन अहिले फेसबुकका अधिकांशले प्रयोग गर्छन् । हामीले अडियो, भिडियो च्याट गर्नका लागि फेसबुकको म्यासेन्जर प्रयोग गर्दै आएका छौं । म्यासेन्जरले त्यसबाहेक के के सुविधा प्रदान गरेको छ ? भन्नेबारे हामीले कहिले सोधीखोजी गर्दैनौं । तसर्थ फेसबुकले दिएका त्यस्ता सुविधाबाट हामी वञ्चित हुँदै आएका हुन्छौं । त्यस्ता के के सुविधा छन् जुन तपाइँलाई थाहा छैन ? आउनुस् ती सुविधाबारे जानौं र